के.पि.प्रवृत्ति, राष्ट्रवाद र जनता !!! – PraharDailyNews
Home/राजनिती/के.पि.प्रवृत्ति, राष्ट्रवाद र जनता !!!
प्रहार डेली न्यूज २०७८, २५ जेष्ठ मंगलवार १६:११
जेठ २५ खेम राज खनाल कैलाली
दोस्रोपटक केपी सरकारले पुनः संविधान माथि ‘कु’ गर्‍यो भनी गएको शुक्रबारको दिन चर्चामा रह्यो । संविधानको धारा ७६(५)को प्रक्रियामा नै नगएर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाइदैनथ्यो!माननीय केपी ओली धारा ७६(३)को प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । नेपालको संविधानले ७६(५) को प्रधानमन्त्रीले ७६को उपधारा ६ बमोजिम विश्वास मत नपाएमा मात्र विघटन गर्न पाउने व्यवस्था स्पष्ट संविधानमा उल्लेख छ । मेरो मनमा विभिन्न कुरा खेलिरहेका छन् ! म एक सचेत नागरिक भनी समाजले बुझेको जस्तो लाग्छ तर एक आम नागरिकको तहमा कुरा गर्ने हो भने सर्वसाधारण जनतालाई देशको अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति के भइरहेको छ केहि मतलब छैन , जनता कसरी बाच्ने हो भन्ने चिन्तामा छन् ।एउटा मजदुरलाई आफ्नो काम बाहेक अन्य कुरामा केहि पनि चासो छैन ।अहिलेको कोभिडको महामारीमा जनता आफ्नो भोको पेट कसरी पाल्ने कुरा मात्र सोच्ने हो त्यो स्वाभाविक पनि छ तर तपाईं हामी शिक्षित भन्ने जमात के यो केपी प्रवृत्ति थाहा नपाएकै हो त ! मलाई लाग्दछ सैद्धान्तिक रुपमा भनिने कुरा र व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा फरक हो । एउटा भनाइ छ “आर्दशका मालिकहरु व्यवहारका दास हुन्छन् ।”
समाज रुपान्तरणको ढुङ्गे युगदेखी अहिलेको पुजीवादी समाज व्यवस्थामा आइपुग्दा मानव जातिले आफू बाच्नका लागि अनेकौं संर्घष गर्यो । शासकले आफ्नोे सत्ता निर्माणका लागि सेना ,पुलिस , प्रशासन ,न्यायलय ,कानुन ,धर्म , संकृति भित्र जनतालाई संविधान कानुन बनाइ राखेको छ। बिज्ञान र प्रविधिले मानिसको दिमागमा के बिचार उब्जिएको छ त्यसलाई आफ्नो विकासका लागि पुजीवादी देशले लिन सक्ने गरि प्रविधिको प्रयोग गरेका छन् ! भन्ने कुरा अहिलेको कोरोना दोस्रो लहर (भेरियान्ट ),तेस्रो लहर यस्तै कुरा प्रमाण हो कि ? मैले माथि पनि भने मजदुरको घरमा सिद्धान्तले छाक टार्न सकिन्न !उनीहरूले देशमा के भएको छ भन्ने कुरा चासो नदिनु स्वाभाविक पनि छ तर तपाईं हामी शिक्षित वर्गले बुझेर पनि नबुझे झैं गरिरहेका छौँ किनकि यो व्यवस्था भनेको चुनावताका मासुभात र रक्सीमा रमाउदै नेपाली विषयमा प्राविधिक स्कुल खोल्छु भन्नेको पछि लाग्ने जमात छ ! नरिसाउनुहोला अहिलेको केपी प्रवृत्ति पनि त्यस्तै हो ।
हामी भित्र पनि यही प्रवृत्ति विकसित भइ “कालेकाले मिलि खाऊ भाले” भन्ने सोचाइ नै हावी छ ! किनकि के यो व्यवस्था ठिक छ त? होइन भने आफू रहेको धरातलबाट माथी उठेर एक छिन बिचार गरौं त ? हामी भित्र रहेको अहमता साच्चै केपी प्रवृत्ति भन्दा कम छ र ! आफ्नो अनुकूलको कुरामा हामी सबै कुरा ठिक छ भनिरहेका हुन्छौं ! अहिले राष्ट्रवादको कुरा चलिरहेको छ ,के सरकारको विरोध वा समर्थन ? गर्दै मात्र राष्ट्रवादी हुने हो । नेपाललाई सिक्किमिकरण बनाउने कुरा किमार्थ राष्ट्रवाद होइन ! खोक्रो राष्ट्रवाद हो । अब के भनौं , नेपाली जनताले शसस्त्र सर्घष(जनयुद्ध )र १९दिने जनआन्दोलनबाट ल्याएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र के यस्तै कुरा देख्न सहिदहरुले रगत बगाएको हुन् त?पक्कै पनि होइनन् ।
संविधान सभाबाट संविधान बन्दै गर्दा विगतका संसदीय विकृति सुधार गर्ने भनी प्रधानमन्त्रीले आफू खुशी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न नपाओस भनी धारा ७६(१)देखि (५) सम्मको सरकार बन्ने सुधारिएको शासकीय संसदीय प्रणाली अवलम्बन गरियो। संविधानसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय व्यवस्था स्थापित गर्न सकेको भए गणतन्त्र १५ जेठमा साच्चै ल्याएको रहेछौं भन्ने आभास हुन्थ्यो । मुलुक त गणतान्त्रिक भयो अवशेष भने पुरानो नै रह्यो अनि कसरी जनतालाई परिवर्तनको महसुस हुन्छ र! प्रगतिशील शक्तिहरुले “खसीको टाउको देखाएर, कुकुरको मासु बेच्ने थलो ” संसद हो भन्ने थाहा पाएर पनि संविधान सभाबाट नेपाली जनताको ७० वर्षको चाहना अनुरुपको व्यवस्था र परिवर्तन दिन सके त? तब त केपी-विद्या राज सबैले निसर्त स्वीकार्नु छ! पुस ०५ पछि अर्को जेठ ०७को गमन !!!
शिव थापा कैलाली जिल्ला सदस्य एवं लम्कीचुहा नगर अध्यक्ष एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन
नेपाली काग्रेसका नेता श्याम पटेलद्वारा संसदीय बिकास कोष खारिज गरि सम्पुर्ण बजेट कोरोना कोषमा जम्मा गर्न माग ।
२०७७, १४ जेष्ठ बुधबार २२:४४
२०७७, २९ श्रावण बिहीबार २०:२४
पर्साका साँसदहरुद्वारा कोरोना संकटमा वीरगन्जको लागि बिशेष प्याकेज माग